किन कठिन छ अमेरिकामा बच्चा जन्माउन र हुर्काउन​? -सानुबाबु सिलवाल​
अमेरिकामा यत्तिले मात्रै बच्चा जन्माउने र हुर्काउने कर्म कान्ड पुरा हुदैन​। सिङ्गल मम र सिङ्गल ड्याड मात्रै नभ​एर सयुक्त एबम जोडिका लागि पनि सकस पुर्ण छ जिन्दगि बच्चा जन्माएर र हुर्काउन​। काम नगरे कहाबाट बिल तिर्ने, कहाँबाट घरको मोर्गेज तिर्ने, कहाबाट गाडीको मासिक इन्सटलमेन्ट भुक्तानि गर्ने? कहाबाट बिमा तिर्ने? कहाबाट ग्रोसरि लगायत युटिलिटी पेमेन्ट बुजाउने? काम गर्न जानै पर्यो। के गर्ने सानो नाबालख बच्चा? अमेरिकामा बच्चा जन्मेर १६ बर्ष नपुगेसम्म एक जना अभिभावकले कानुनि रुपमै छोड्न मिल्दैन​। मतलब कुनै तरिकाले बच्चा एक्लै छोडेको पाइए आमा,बाउ जेल नै जान सक्दछन​। उस्तै परे अमेरिकन सरकारको सोसियल डिपार्टमेन्ट डी एस एसले बच्चा लगिदिन्छ​। यसो भ​एमा बाउ आमाले १८ बर्षसम्म बच्चा हेर्न र घरमा ल्याउन पाउदैन​। बच्चा फोस्टर केयरमा पठाइ दिनसक्दछ​। कसैले बेबि एडप्ट गरेमा बच्चाको थर पनि फोस्टर प्यारेन्ट मुताबिक हुनसक्दछ​। त्यसैले बच्चालाइ हिसा गर्ने, केयर नगर्ने, हिसा गर्ने घर​, बच्चाका अगाडी अनैतिक गतिबिधि भ​एमा बच्चाले कुनै कारणबस प्रहरि, लेगल कानुनि निकाय वा स्कुलमा सुनाइदियो भने आबुआमा जेल जान सक्दछन र १८ बर्षसम्म बच्चालाइ आउ आमासङ्ग छुटाएर राखिदिन सक्दछ​।
अमेरिकामा उदाहरणकै लागि बेबि केयर फुलटाइम केयर जस्तै मिसिसिपि राज्यमा बर्षको झन्डै ५ हजार ४ सय ९६ डलर पर्द्छ भने यहि बेबि सिटिङ्ग बेबि केयरका लागि बर्षमा मिसिसिपि भन्दा झन्डै ३ गुणा बढि १६ हजार ५ सय ४९ डलर पर्ने रहेछ म्याच्याच्युसे राज्यमा । भनेपछि कसरि थेग्नु यत्रा खर्च बेबि जम्नाउदा र हुर्काउदा। अझै अमेरिकन सरकारले बच्चा र आमाको आगि मेडिकेडको ब्यबस्था गरिदिएको छ नत्र के हालत हुने थियो अमेरिकन सरकारको राहत र बेनेफिट नहुदो हो भने। अब त झन आप्रबासिहरुका लागि अब आइन्दा सरकारि बेनेफिट लिएको पाइएमा तिनले बाहिरबाट आफ्ना परिवारका सदस्यहरुलाइ अमेरिका ग्रिन कार्डमा ल्याउन नपाउने गरि निषेधित निति अगाडी सारिसरेको छ​। यसबाट काम गरि खाने र काम नगरि खाने दुबै नेपालि मर्कामा पर्ने भ​ए अमेरिकामा। यो सकसपुर्ण र महाभारत बच्चा जन्म र हुर्काइ एबम अमेरिकन सरकारको तारो थेग्न मुश्किल हुन सक्दछ अबको जनजिवन​।